နွေဆီရောက်ငြား အစချီ ကိုယ်တွင်းပြည့်­ပိုဒ်စုံ ရတု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နွေဆီရောက်ငြား အစချီ ကိုယ်တွင်းပြည့်­ပိုဒ်စုံ ရတု
နွေဆီရောက်ငြား အစချီ ကိုယ်တွင်းပြည့်­ပိုဒ်စုံ ရတု
Posted by koyin on Mar 26, 2013 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
နွေဆီရောက်ငြား၊ မနား ငှက်ငယ်
ဆောင်းခိုမယ် လား၊ ပျက်ပြယ် သွားမှ
ခန စက်ရန်၊ ပျံပါလေအုံး
မိုင်ချီ နှုန်းနဲ့၊ ရုန်းထွက်မယ်ပြင်
မိုးသက် ဆင်လာ၊ ပင် ရှာခက်တုန်း
မြင်ရာ ပုန်းဖို့ နေပူရှင့်…။ ။
ထွေလီဖောက်ပြား၊ ကစား သက်လှယ်
ခေါင်းကို ကွယ်ထား၊ မျက်ကွယ် အားရ
ခိုင်ကျည် ထုံးဖွဲ့၊ သုဉ်းပျက်တယ် ထင်
ချိုးဖျက် ညင်သာ၊ ကြဉ် ရာသက်လုံး
သင်္ခါ ဆုံးသို့ ခြွေယူလင့်…။ ။
သွေဖီ ခြောက်ခြား၊ သနား ဖက်တွယ်
တောင်းဆို ပယ်အား၊ ပြက်ရယ် ခါးမှ
မလှ နက်ဖန်၊ ကံသာစေ ရှုံး
နိုင်ချည် ပြုံးလှည့်၊ အုံးစက်ဝယ် ယှဉ်
ပြိုးပြက်စင်ကာ၊ ရင် နာလျှက်တုန်း
ကြင်နာဆုံးမို့ ဗွေယူသင့်…။ ။
(ကိုဟယ်ရီ၏ လောကနာရီကို မှီငြမ်းရေးသားပါသည်…)
လောကနာရီ အစချီ ကိုယ်တွင်းပြည့် ရတုပိုဒ်စုံ
လောကနာရီ၊ ဘာသာကြည်မွေ့၊ ခါမှီရွေ့ညောင်း၊ ဆောင်းတပြန်လှစ်၊ နှောင်းဟန်ဖြစ်တည်၊
တွယ်နှစ်ကြည်ထွေး၊ ရစ်သီနွေးလို။ ။ လှစ်တွေးပိုသင့် မပိုသင့်။
မောလျတာရှည်၊ ခါရာသီကွေ့၊ ပြာသီငွေ့လောင်း၊ ဟောင်းတဖန်သစ်၊ လောင်းပြန်ရစ်သည်၊
ငယ်ချစ်သီကြွေး၊ ချစ်ရည်ထွေးစို။ ။ ချစ်တေးဆိုသင့်မဆိုသင့်။
သောကရာသီ၊ မာယာသီဝေ့၊ ယာယီရွှေ့အောင်း၊ ပြောင်းအပြန်ဖြစ်၊ စောင်းမာန်သစ်ချီ၊
ပယ်ပစ်ချည်ဝေး၊ နှစ်ရှည်ဆွေးပို။ ။ ဟစ်ကြွေးငိုသင့် မငိုသင့်။
ကိုယ်တွင်းပြည့် ပိုဒ်စုံ ရတုလို့ ခေါ်ပါတယ် … ရတု တွေမှာ ပိုဒ်စုံဆိုတာက အပိုဒ်ကြီး သုံးပိုဒ် ရှိတဲ့ ရတု တွေကို ခေါ်တာပါ … တစ်ပိုဒ်ပဲရှိရင် ဧကပိုဒ်ရတု၊ နှစ်ပိုဒ် ရှိရင် အဖြည့်ခံရတု လို့ ခေါ်ပါတယ် ….
ကိုယ်တွင်းပြည့် ဆိုတာကတော့ အပိုဒ် သုံးပိုဒ်လုံးရဲ့ ရှိသမျှ ပါဒတွေအားလုံးကို တပိုဒ်ချင်းစီ နဘေကိုက်အောင် ရေးထားတာကို ခေါ်ပါတယ် … ရင်တွင်းပြည့် လို့လည်း ခေါ်လေ့ရှိပါသေးတယ် … သဘောကတော့ ….
လောကနာရီ၊ မောလျတာရှည်၊ သောကရာသီ၊ ဆိုပြီး အချီပိုဒ် (စစချင်းရေးတဲ့အပိုဒ်) တွေကို နဘေထပ်ရပါတယ် …
ပြီးရင် နောက်ထပ် ဒုတိယအပိုဒ်တွေကိုလည်း …ဘာသာကြည်မွေ့၊ ခါရာသီကွေ့၊ မာယာသီဝေ့၊ ဆိုပြီး နဘေကိုက်အောင် ထပ်ရေးရပါတယ် …
တတိယအပိုဒ်တွေကိုလည်း … ခါမှီရွေ့ညောင်း၊ ပြာသီငွေ့လောင်း၊ ယာယီရွှေ့အောင်း၊ ဆိုပြီး နဘေထပ်ရပါတယ် …
အဲဒီလို ရှိသမျှအပိုဒ်အားလုံး တပိုဒ်မကျန် နဘေလိုက်ထပ်ပြီးရေးရတာမျိုးပါ … အလွန်ရေးရခက်ပါတယ် … ကျနော် ဒါမျိုး ရတု ၂-ပုဒ်ပဲ ရေးကြည့်ဖူးပါတယ် … နောက်ထပ်ရေးဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး … ဒီ ရတုက ပထမဆုံး စမ်းရေးကြည့်ထားတဲ့ ကိုယ်တွင်းပြည့် ပိုဒ်စုံရတုအတိုလေးပါ … နောက်ထပ် အရှည်ရေးထားတဲ့ တပုဒ် ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် …
အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်ဗျာ … တချက်ကြည့်ရုံနဲ့ လိုက်ရေးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုရင့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားချီးကျူးပါတယ် … ကာရန်လည်းကိုက်၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းလည်း ပြေပြစ်လှပသလို အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်လည်း ကောင်းမွန်လှပါရဲ့ … တကယ်တော့ ဒီလို ကိုယ်တွင်းပြည့်ပိုဒ်စုံရတု ရေးရတာဟာ ပထမအပိုဒ်ကြီးရဲ့ ရှိသမျှ အပိုဒ်ငယ်အားလုံးကို နဘေနှစ်ဆင့် (ဒုတိယ နဲ့ တတိယ အပိုဒ်ကြီးတွေမှာ) ထပ်ရတာမို့ အတော်ခက်ပါတယ် … တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ရေးလို့မရပါဘူး
မှားတယ်ရယ်လို့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အချပိုဒ်မှာ နည်းနည်းလေးထောက်နေပါတယ် “… ပင်ရှာခက်တုန်း မြင်ရာ ပုန်းဖို့ နေပူရှင့် …” ဆိုပြီး တန်းချလိုက်တဲ့အခါ တုန်း – ပုန်း ကာရန်ဟာ ၄-၃ ပဲ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ကာရန်တတွဲမပြည့်ခင် ဖြတ်ချ လိုက် သလို ဖြစ်သွားပါတယ် … နောက်ထပ် တပိုဒ်လောက်ထပ်ဖြည့်ပြီး ၄-၃-၂ သို့ ၄-၃-၁ နဲ့ ချလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြောစရာ မရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ ရှားရှားပါးပါး ရတု တပုဒ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ …
ဒါကလည်း အမှားတော့ မဟုတ်ပါဘူး … မဆိုစလောက်သော ချို့ယွင်းချက်ကလေးသာလျှင် ဖြစ်ပါတယ် … ဒါပေမဲ့ ပုဝါဖြူပေါ်က အမည်းစက်လေး တစက်ဟာ အလွန်ထင်ရှားတာမို့ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် ဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက် ကျနော် ထောက်ပြလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
အခုလို ရှားရှားပါးပါး ပါရမီရှိတဲ့သူတယောက်ကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ဂန္ထဝင်မြန်မာတွေအတွက် ကျနော် အတော်လေး အားတက်မိပါတယ် … ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြခွင့်ပြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် …
ဒီကဗျာမှာ နောက်ထပ် တချက် အထူးပြုပြီး ချီးကျူးချင်တာက “အသံ” ပါ … အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Rhythm လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ် … ရှေးမြန်မာ့ကဗျာစကား နဲ့ ပြောရင်တော့ လေယူလေထား၊ တနည်းအားဖြင့် ဂရု၊ လဟု ယူထားပုံပဲဖြစ်ပါတယ် …
အသံထွက် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ … ပဓာန ကာရန်တွေ အားလုံး အသံအနိမ့်အမြင့် ပြေပြစ်ပြီး ဂရုသံတလှည့်၊ လဟုသံတလှည့် တက်လိုက်ကျလိုက်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ကာရန်အသွားကို တွေ့ရပါမယ် …
မြန်မာကဗျာတွေမှာ ကာရန်တွင်မကဘဲ အသံလည်း အရေးကြီးကြောင်း သတိပြုမိတဲ့သူ နည်းပါတယ် … တကယ်တော့ ကဗျာမှာ အသံ (Rhythm) ဟာ ကာရန်ထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် … ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ် … တချို့ကဗျာတွေဟာ ကာရန်မှန်ပေမဲ့ ဖတ်ရတာ ပြေပြေပြစ်ပြစ် မရှိဘဲ ထောက်သလိုဖြစ်နေတာ အဲဒီ Rhythm ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
ကိုရင်ရေးခဲ့တဲ့ မြန်မာကဗျာတွေ စုထားတာပါ
ခညားပေးထားဒဲ့ လင့်ခ် က အလုပ်လုပ်ဘူးဂျ …
အိုက်ဒါ လုပ်အုံး ….
ဒီခေတ်မှာ.. ရတု ကဗျာ ပျို့ လင်္ကာတွေကို.. စည်းကမ်းအတိုင်းစပ်နိုင်သူတွေ တော်တော်ရှားသွားပါပြီ..
ကိုဟယ်ရီရဲ့ မြန်မာကဗျာဆိုတာ ဂျို နဲ့လား စာစုတွေက မြန်မာကဗျာချစ်သူတေံအတွက် တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ရတနာတွေပါ
ရေးဖို့ မဆိုထားနဲ့  ဖတ်ပြီးခံစားနိုင်ဖို့ တောင်မှမလွယ်
လေးလေးစားစား ဖတ်ရှုရင်း နည်းနာယူပါတယ်
ကွန်မန့်မရေးဖြစ်ပေမဲ့ ဖတ်နေတယ်လို့ သိထားပေးပါ ဆရာကိုရင်ရေ
တစ်ခုပဲ ဆရာ တော့ မတပ်ပါနဲ့
အခုမှ လေ့လာတုန်းအဆင့်မို့ မခံယူရဲလို့ပါ
နွေရာသီရောက်ငြား၊ မီးဘေး ဆိုးကြီး ကြောက်နေတယ် လား၊ ပြာကျ သွားပြီး ဘဝပျက်ရန်၊
မီးမလောင်ခြင်ရင် အိမ်နောက်ဖေး ရေတစ်ပီပါစီထားဂျဟယ်
ကဗျာမှာ အသံ (Rhythm) ဟာ ကာရန်ထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်
အဲဒီ စကားကို လက်ခံပါတယ် ။
မြန်မာကဗျာလောက တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ ရာ..
ဒီလို ကဗျာတွေ အကြောင်း.. ရေးကြ ပြောကြသူတွေ များများ ပေါ်ပေါက်လာလေ…ကောင်းလေပါပဲ ။
ကိုရင်ကြီး ရဲ့ကဗျာတော်တော်များများကို..လေးစားဦးညွတ်စိတ်နဲ့ဖတ်ခဲ့မိပါတယ် ။
ကွန်မန့်မပေးဖြစ်တာကတော့…
ဘာ ပြောရမှန်းမသိလို့ ..
(ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး … ကျွန်တော် သိပ်မပြောရဲ သေးလို့)
တိတ်တိတ် ကလေး.. ခံစားပြီး..
တိတ်တိတ်ကလေး…. အိမ်ပြန်ခဲ့ ရတဲ့ နေ့ တွေ….. ရှိပါတယ် ။
ကဗျာတွေ… ဆက်လက် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ..
ကိုယ် စိတ် နှစ်ပါး..ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ..လို့ .
ဟွန့် ကွန်မန့်ဒေ ပျက်ကုန်ပိ
ဧဒင်မှာ ကို အလင်းဆက် ကဗျာဒေ ဖတ်ဖြစ်တယ် ကြိုက်တယ် အတုခိုးတယ်